NoFap ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မယူပါနှင့်သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ Brain On Porn သည်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာလိမ့်မည်
ပေါ့ပေါ့တန်တန် NoFap ယူမနေပါနဲ့, သို့မဟုတ်သင်ပြန်သွားကြသည်မညျ
LINK - NoFap ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မယူပါနှင့်သို့မဟုတ်သင်ပြန်လည်ထူထောင်လာပါလိမ့်မည်
ဒီတစ်ခါလည်းငါသိသာထွက်ညွှန်ပြနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ NoFap စိန်ခေါ်မှုစတင်သောအခါပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ငါကအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်ခဲ့ခံစားရတယ်။ ဟေ့, Im flatlining! ငါတောင်ဒါကြောင့်လွယ်ကူသော FAP ချင် dont! အဆင်ပြေတောင်မှ browsing sexy Tumblr pics feeling im! အရွယ်ရောက်ပြီးသူ chatrooms သို့ Going!
သင်သိသောနောက်တစ်ခု၊ တစ်ပတ်အကြာ၊ ငါပြန်လည်သက်ရောက်သည်။ သင်ပြန်စသောအခါသင်စိတ်ထိခိုက်သွားသည်၊ သင်စိတ်ဓာတ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့်သင်၏ nxt မကြိုးစားမီ“ အနည်းငယ်ကို crank” လုပ်နိုင်သည်ဟုတ်မှန်ပါသည်။
ကင်လုပ်ခိုင်းနဲ့တူ Feeling နှင့်သင်အမှန်တကယ်ကဒီ shit အပေါ်မှီခိုနေကြသဘောပေါက်, သင်ထိန်းချုပ်မှုမှလေ့လာသင်ယူရန်ရှိသည်က၎င်း၏တစ်ခုခု။ ယခုတွင်ငါသည်, um, နဖူးစည်းစာတမ်းဟာဘရုစ် Banner နားလည်: အများကြီးအဆိုပါရှိသွားပြီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာ Fapstronauts အဆက်မပြတ်အတွက်ပေးနှင့်, er, နဂါးထွက်မသွားပါစေရန်တိုက်တွန်းတိုက်ခိုက်နေနေကြသည်။ 😛
ငါပုံသဏ္ဍာန်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်များနှင့်တစ်နှစ်လောက်၏အာကာသအတွင်း 110 ပေါင်အကြောင်းကိုဆုံးရှုံးဖို့နိုင်ခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့ဒီ, အ NoFap စိန်ခေါ်မှု .. ကြာ - ငါစည်းကမ်းတစ်ခုမရှိခြင်းရှိပါကသကဲ့သို့ငါပိုကောင်းတဲ့ဒီကိုကျော်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်၎င်း၏ nto ခဲ့ထင် ဖြည့်စွက်ရန် willpower တစ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖောက်။
သင့်ရဲ့အစပျိုးအကဲဖြတ်ရန်နှင့်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်။ ငါ့အဘို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူကစာသား-based RP, sexy Tumblr pics, porn streaming များက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျပျင်းကြသောအခါ, သင် browse စတင်, သင်သိမီ edging နှင့် relapse ဖို့ရန်အလွန်ချောဆင်ခြေလျှောအပေါ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသူတို့အားလုံးကိုလက်လှမ်းပပျောက်။ စာသား။
ဒီစဉ်းစားငါ့အမှားလွယ်ကူသည်ကိုလုပ်မနေပါနဲ့။ တစ်ခါတလေသင့်ရဲ့လိင်စိတ်သုညဖြစ်မည်, ကလွယ်ကူပုံပေါက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကခဲမျက်တော်ပြေခြင်းနှင့်အတူပြန်လည်ရောက်ရှိ။ သင့်ဦးနှောက်ရောက်ရှိမည် PMO သင့်ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်အဘို့မဆိုဆင်ခြေတက်စေမည်။
လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်အားကစားထွက်သွားပါ, pushups အစုတခုအချို့အိမ်မှုဝေယျာပြုပါ - ငါအဖြစ်မကြာမီသင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့အစပျိုးပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်ဖမ်းအဖြစ်အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာ၏အကြံပေးချက်ကိုကြိုက်တယ်။ အဆုံးစွန်သောအရေးပါသည်ပေမယ့်အမြဲအိမ်မှာလုပ်ဖို့အချို့စီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုရှိသည်, ငါ 2-4 နာရီတစ်ရက်အကြောင်းကို inline စကိတ်စီးဖို့ပြင်ပမှာသွားနှင့်ငါ့ကိုသင်ပြောပြကြကုန်အံ့, ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုငါအိမ်တွင်ကြောင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းပြန်ရောက်သွားတယ်, သင်၏ ဦးနှောက်မသက်ဆိုင်သင်နာရီအစောပိုင်းကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ၏, ကလိုသောအရာကိုလိုသည်။ သင့်ကိုအစဉ်မခွဲခြားဘဲသင်တို့နေရာ၏, အလုပ်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုလုပျနိုငျတစ်ခုခုရှိသည်။
Diet ကဲ့သို့ပင်အချိန်တစ်ရက်ကယူပါ။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်အလေးချိန်တပ်အပေါ်သွားသောအခါအချိန်များတွင် Id ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ demoralized ရငါ shit စိတ်ဓာတ်ခံစားရတယ်, ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုငါကလုပ်နေတာခဲ့သည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းသံသယအောင်, ရှိသမျှမှာအဘယ်သူမျှမကိုယ်အလေးချိန်တိုးတက်မှုမြင်တော်မူ၏။ သငျသညျရှေ့တျော၌ရှိလူတိုင်းအတွက်ဖြစ် Hacking ကို, အကျိုးကျေးဇူးများငြင်းနေကြသည် Trust, သင်ရုံ program ကိုကပ်ဖို့ရှိသည်နှင့်ရေရှည်စဉ်းစားပေမယ့်သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုကာလတိုထားကြ၏။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသင် 90day တံဆိပ်များအတွက် FapFree ခံရဖို့ချင်လျှင်ပင်, ထိုနေ့ရက်သည်၏အဆုံးတိုင်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (သို့မဟုတ်တော့ဘူး!) ။ တစ်ကြိမ်တစ်နေ့မှာသူကယူပြီးသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်စီမံခန့်ခွဲစေကူညီပေးပါမည်, သင်ဖွယ်ရှိသင်ထင်လျှင်ထက်လျော့နည်း demoralized ဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟုအဆိုပါ 67day တံဆိပ်ဘို့သွားကြဖို့ shit အိုး 90 ရက်ပေါင်း .. "
သင်သည်သင်၏အစပျိုးခြင်းကနေသင်တို့ကိုအာရုံပြုရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့အတွက်မရှိမဖြစ်သည့်အခါ NoFap ကိုဖတ်ပါ။ ကြောက်မက်ဘွယ်အခြားသူများကိုပြုလုပ်တတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ, သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ဘယ်လောက်, အစိန်ခေါ်မှုလုပ်နေတာကနေခံစားမိအလွန်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ဖြောင့်ခြင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်မည်ကိုမည်သို့ဖတ်ရှုခြင်း, တကအလေ့အထလုပ်ပါ။
ကောင်းသောလူအပေါင်းတို့အားကံ, ငါ့အဘို့အဖြစ်, ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ဦးအချိန်ကတနေ့ .. သွားပါ!